जग्गाको क्षेत्र रुपान्तरण कसरी गरिन्छ र जग्गाको मापन के आधारमा गरिन्छ ? व्यवहारिक जानकारीका लागि एक पटक पढ्नुहोस् । – Yuvajagaran Nepal's Online Newspaper
जग्गाको क्षेत्र रुपान्तरण कसरी गरिन्छ र जग्गाको मापन के आधारमा गरिन्छ ? व्यवहारिक जानकारीका लागि एक पटक पढ्नुहोस् ।
विराटनगर, मोरङ, माघ १३ गते । भौगोलिक हिसाबले जग्गाको मापन फरक फरक तरिकाले गरिन्छ । यसको मापनका विषयमा सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले पाठकको जानकारीका लागि हामीले जग्गा मापनका विषयमा यो सूचनामूलक विषय राखेका छौं । आजभोलि हरेक क्षेत्रमा, हरेक गाउँ र टोलमा जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्नेहरुको बिगबिगी नै छ । मापनको विषयमा जग्गा व्यापारीलाई भन्दा बढी तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ ताकि जग्गा मापन गर्दा कसैले ठग्न नपाओस् ।
त्यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा दाम, पैसा, आना र रोपनी जग्गा मापन गरिने आधारभूत इकाईको रूपमा चलिआएका छन् । यी इकाईलाई प्रस्तुत तालिकाका आधारमा विश्वव्यापी सर्वमान्य इकाई (वर्गफिट वा वर्गमिटर) सँग रूपान्तरण गरेर जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफल कति हुन्छ वा कसरी नापिन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
पत्रपत्रिका र अनलाईनबाट
सरकारी ढिकुटीको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गर्न बन्देज
सत्र न्यायधिश छानविनको दायरामा